660T, XCMG Kasị Ukwuu-tonnage kwụ directional Drilling Forges n'ime Indian Market - China Xuzhou Fenghe Intelligent
660T, XCMG Kasị Ukwuu-tonnage kwụ directional Drilling Forges n'ime Indian Market
XCMG kasị ukwuu-tonnage kwụ directional egwu nnọọ e exported ka India n'oge na-adịbeghị, na ụlọ ọrụ si XZ6600 kwụ directional mkpọpu ala, featuring kacha ike 6600KN, ga-tinye n'ọrụ na eke na gas pipeline ngo gafee Ganges River.
XCMG Kasị Ukwuu-tonnage kwụ directional Drilling XZ6600 abịarute na India
"M ga-achọ na-a-agbalị."
Mr. lei Nuo, si XCMG Import & Export Co., Ltd. bụ na-elekọta nke Indian ahịa nke XCMG. N'elu-ekwu okwu banyere mbupụ nke XZ6600, ọ apụ kwuru banyere ya negotiating na ahịa banyere 300t directional-egwu maka oge mbụ na 2015. Dị ka ndị dị otú ahụ ngwaahịa nke XCMG adịghị ghọtara mbupụ na batches na India, ndị kwụ directional mkpọpu ala abụghị ihe bụ isi nhọrọ nke na-eji ọkụ. Otú ọ dị, ndị ahịa e mechara kwaga mgbe ọ fọrọ obere ọnwa atọ ogologo proactive nkwurịta okwu banyere XCMG si ulo oru aha na ikpe nke uwa ọrụ, na ha kpebiri ịzụta kwụ directional egwu XCMG na-a-agbalị. The n'ji ozugbo jiri egwuregwu kwuo mgbe na-eme ka, na-asị na nke a bụ m mbụ họrọ XCMG si ngwaahịa, n'ihi na m na na na na ma gị na ngwá pụrụ ịrụzu ngo ọma. Ma m hụrụ gị kasị pụrụ ịdabere na mgbe ogologo oge mgbanwe. M kwere na gị na m ga-achọ na-a-agbalị. Mr. lei Nuo bụ nnọọ mpako n'elu na-ekwu okwu ya na ahụmahụ.
"M nwere ike zuru ike na obi sie dị ka ogologo dị ka XCMG mkpara na-ebe a."
M na-echeta na nke mbụ ọrụ nke XZ3000 bụ na China si Spring Festival. Ma iji ekwe nkwa zuru nchekwa mgbe ka ahịa nyeere, azụmahịa manager karịsịa etinyere ụlọ ọrụ maka mmezi otu nke ọrụ na technology ka na-enye ike ọzụzụ na nkwado ọrụ nke oru ngo. Oru ngo-a ọma okokụre mgbe 2 ọnwa bi ọrụ, n'oge nke ọ dịghị nsogbu mere banyere ngwá. The ahịa gwara anyị delightedly: àgwà nke gị ngwaahịa bụ n'ezie dị nnọọ mma, na ndị gị na ụlọ ọrụ ndị mmadụ na-na saịtị dum oge, ọ na-eme ka m ala.
M ga-ewebata XCMG si na ngwaahịa na ihe enyi.
Ugbu a, ọtụtụ ihe nweta nke na XZ3000 enyerela ahịa ka nọgidere na-agbasa ya ahịa. XZ6600 na XZ3000, ngwá ndị na kasị tonnage nke XCMG rutere na India maka nkwonkwo-ewu, nwere ma ejikwara gafee Ganges River. A ahịa gosiri na ya ụtọ na-enwe ohere iji XCMG kasị ukwuu kwụ directional mkpọpu ala ngwaahịa, o kweere na XZ6600 ga doro anya mezuo ọrụ ọma, ugbu ọ bụ obi ụtọ na-ịme XCMG si ngwaahịa ndị enyi ya, na-ekwe ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ aka ịghọta na iji elu-edu na elu na-eri-irè ngwá ọrụ nke XCMG na-ewu.
Ịgbaso ọlaedo ọkọlọtọ nke "eduga Technology, Ebighị Products", XCMG ahụla afọ-on-afọ oké abawanye na ahịa olu ebe ya ịgagharị kwụ directional mkpọpu ala ahịa na India na 2013. Ugbu a, nwe nke ndị dị otú ahụ egwu ngwaahịa bụ banyere 200 tent na India, na mkpa ahịa olu na-ekwu mbụ itie ke Indian ahịa dị afọ a.